C/xakiim Axmed Guuleed, wasiirka warfaafinta Puntland oo Galkacyo ka soo degay. – Radio Daljir
C/xakiim Axmed Guuleed, wasiirka warfaafinta Puntland oo Galkacyo ka soo degay.
Galkacyo, Dec 29 – Waxaa maanta ka soo degay garoonka diyaaraha ee magaalada Galkacyo wasiirka cusub ee warfaafinta Puntland Cabdixakiim Axmed Guuleed. Mas?uuliyiinta dawladda ee ka hawlgashada gobolka Mudug ayaa si diiran u soo dhaweeyey wasiirka, waxaana kaloo soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay dad weynaha ku dhaqan magaalada Galkacyo.
Wasiirka oo dhawaan la magacaabay, ayaa xilligii loo magacaabay wasiirka warfaafinta ku sugnaa dalka dibaddiisa gaar ahaan wadanka Kenya oo uu hadda ka soo kicitmay, waxaana uu imaanshihiisa ku micneeyey in uu ku saabsan yahay sidii loogu dhaarin lahaa xilka loo dhiibay isla markaana uu ula wareegi lahaa xilka wasaaradda wafaafinta.
Wasiirka oo saxafadda kula hadlay garoonka diyraaradaha ee magaalada Galkacyo ayaa sheegay in uu qorshaynayo is-baddel cusub oo uu ku sameeyo wasaaradda warfaafinta, isgaarsiinta iyo hiddaha, taasi oo uu carabka ku dhajiyey xilli dhaw in la dareemi doono.
Wasiirka oo ay wariyaashu weydiiyeen waxa la taaban karo ee uu doonayo in uu soo kordhiyo, ayaa sheegay in ay ka mid tahay hirgalinta idaacadda ku hadasha afka dawladda taas oo uu sheegay xilli dhaw in ay hawada soo gali doonto.
Dhanka kale waxaa uu soo hadal qaaday xaaladda ay ku sugan yihiin suxufiyiinta ka hawlgasha deegaannada Puntland, wuxuuna tilmaamay in ay haysteen xorriyad iyo madax bannaani aad u weyn, hase ahaatee ay jiraan dhibaatooyin mararka qaar soo wajaha taasi oo uu sheegay in uu wax ka qaban doono.
Waa markii ugu horraysay oo wasiirka cusub ee warfaafinta Puntland Cabdixakiim Axmed Guuleed uu yimaado Punland tan iyo markii loo macagaabay xilka wasiirka warfaafinta, waxaana lagu wadaa in uu u sii gudbo magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland.